Madaxweynaha J.F.Somalia oo lagu wado in uu kulan la qaato dhiggiisa dalka Turkiga | Radio Muqdisho
Madaxweynaha J.F.Somalia oo lagu wado in uu kulan la qaato dhiggiisa dalka Turkiga
Published on December 5, 2012 by Mowliid · 1 Comment · 3,128 views
Madaxweynaha J.F.Somalia Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo xalay gaaray dalka Turkiga ayaa lagu wadaa in maanta uu kulamo la yeesho mas’uuliyiinta dalka Turkiga.
Madaxweynaha oo ay socdaalkiisa ku wehliyaan wasiirro ka tirsan dowladda oo ay ka mid yihiin wasiirrada Gaashaandhigga iyo Maaliyadda ayaa la filayaa in Muddada uu joogo dalkaasi uu la kulmo madaxweynaha Turkiga, R/wasaaraha iyo Guddoomiyaha Baarlamanka dalkaasi.
Labada dowladood waxa ay ka wada hadlidoonaan xoojinta xiriirka labada dal iyo sidii dowlada Turkiga ay uga qeybqaadan laheyd dib u dhiska dalka iyo ciidamada qalabka sida, iyadoo wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya mudane C/xakiin Fiqi uu la kulmidoono dhigiisa dalkaasi ayna ka wadahidli doonaan arrimaha ciidamada iyo dib u dhiskooda.
Booqashada Madaxweynaha J.F.Somaliya ee dalka Turkiga ayaa ka dambeeysay casuumad rasmi ah oo uu madaxweynuhu ka helay dhiggiisa dalkaasi Turkiga.
intisaam xasan says:	December 5, 2012 at 5:29 pm	marka hore waan idin salaamayaa wariyaasha radio moqdisho runtii aad baan ugu faraxsanahay booqashada madaxweynaha uu ka tagay dalka turkiga